Josh Galvez iyo cajaladihiisa cajaa'ibka leh ee sawir gacmeedka dijitaalka ah | Abuurista khadka tooska ah
Josh Galvez iyo fiidiyowyadiisa dijitaalka ah ee cajiibka ah
Josh Galvez waa agaasime farshaxan iyo sawirqaade asal ahaan kasoo jeeda Filibiin. In kasta oo xirfaddiisu aysan u oggolaanayn inuu naftiisa u huro gebi ahaanba horumarinta shaqsiyan shaqsiyeed, mar kasta oo uu waqti helo wuxuu horumariyaa mashaariic cusub oo inbadan oo ka mid ah ay shabakaddu la wadaagto qaab farshaxan xawaare leh. Maanta waxaan la kulmay mid ka mid ah fiidiyowyadiisa oo aan aad ula yaabay. Isticmaalkiisa midabku waa mid caqli-gal ah farsamadiisana waa laga masayr karaa, natiijada sannado badan oo shaqo ah.
Fiidiyowyadiisa waxaan ku arki karnaa sida sawirradiisu ugu soo noolaanayaan indhaheenna hortooda iyadoo ay jiraan nuxurro iyo faahfaahin. Mid kasta oo ka mid ah fiidiyowyadiisu waa sida muuqaal muuqaal ah oo aan kugula talinayo inaad aragto maxaa yeelay marka lagu daro dhiirrigelinta, waxay kuu noqon karaan sawir aad u fiican oo kugu habboon inaad ku kasbato fikradaha qaar markaad ka shaqeyneyso sawirrada iyo rinjiyeynta dhijitaalka ah. In kasta oo uu ka shaqeeyo dhammaan noocyada taageerooyinka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka, laga soo bilaabo 2010 wuxuu ku dhacay jacayl rinjiyeynta dijitaalka ah in kastoo taasi aysan ahayn sababta ay uga tagtay isticmaalka aaladaha soo jireenka ah. Waa kuwan tusaalooyin ka mid ah shaqadooda qaab muuqaal ah iyo astaamahooda si aad si dhow ula socon karto shaqadooda cajiibka ah, maaddaama ay ku dhiirrigelinayaan dhammaan farshaxan-yaasha ugu horreeya iyo sawir qaadayaasha inay sii wadaan shaqada adag ayna ka faa'iideystaan ​​dhammaan qalabka ay bixiyaan teknoolojiyada cusub.
Muuqaalka shabakada Behance
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Josh Galvez iyo fiidiyowyadiisa dijitaalka ah ee cajiibka ah
Sawirada qosolka leh ee John Holcroft